Famakafakana ny fanasan'i Apple ho an'ny teny fototra 22 Oktobra | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iPad Air, About us, Apple products
Araka ny efa nampoizina dia marina ny tsaho ary minitra vitsy lasa izay dia nanamafy ny hetsika niaraka tamin'ny teny filamatra i Apple: "Mbola betsaka ny zavatra tokony hotantaraintsika". Tsotra ny fomba fiasan'ny Big Apple: manamarina hetsika na teny ifotony izy ireo amin'ny alàlan'ny fandefasana ny fanambarana an-gazety / fanasana amin'ny haino aman-jery manandanja indrindra eto an-tany ka amin'ny andron'ny fehezanteny fototra dia ampahafantarina ny rehetra ny zava-nitranga tao anatin'ny Ivotoerana Yerba Buena (amin'ity tranga ity) izay hita ao amin'ny San Francisco.
Ao amin'ny Actualidad iPad dia manana toy ny mahazatra isika hadihadio ny fanasana izay alefan'i Apple isaky ny manamarina hetsika iray izy. Ny zavatra voalohany hitantsika amin'ny fanasana ifotony ny 22 Oktobra dia ny fehezanteny: «Mbola be ny fonony"Izay amin'ny Espaniôla dia ho toy ny:" Mbola betsaka ny zavatra tokony hotadidintsika. " Izy io dia manondro mazava tsara ny Smart Covers ampiasain'ny iPads. Taorian'ilay fitsambikinana dia nandinika ny volavolan'ny fanasana izay nalefan'i Apple tamin'ny media izahay mba hanamafisana ny hetsika tamin'ny 22 Oktobra.
1 "Mbola be ny fonosantsika"
2 Ny endriny: maro loko sy fampahalalana kely eo imasonao
3 Keynote ho an'ny 22 Oktobra: Inona no azontsika jerena?
"Mbola be ny fonosantsika"
Ny tena mahavariana ahy dia ilay teny filamatra amin'ilay fanasana milaza zavatra toy izao: «Mbola betsaka ny zavatra tokony hotadidintsika«. Inona no dikan'izany?
Smart Cover: Mazava fa ao amin'ny teny ifotony dia hahita Smart Covers izay nohavaozina indray isika ahafahantsika manarona ny efijery amin'ny iPad 5 sy iPad Mini 2. Satria tsy dia be ny tsaho momba ity famolavolana ity, dia tsy afaka mahazo hevitra momba ny Apple isika ao an-tsaina ho antsika.
Vokatra vaovao: Amin'ny tapany farany amin'ilay teny filamatra, mieritreritra aho fa ireo izay avy any Cupertino te-hilaza aminay fa misy fitaovana maro hafa hahitana azy, toa ny iWatch na angamba ny Apple TV. Azo antoka fa mivoatra ao amin'ny laboratoara anao izy ireo. Ahoana raha mahita fitaovana vaovao toa ny iWatch isika mandritra ny fehezanteny 22 Oktobra?
Hafatra tsy ara-dalàna: Milaza amintsika ve i Apple fa tafaporitsaka ireo zavatra tadiavin'izy ireo?
Ny endriny: maro loko sy fampahalalana kely eo imasonao
Amin'ny fanasana Apple rehetra amin'ny hetsika manokana dia hitantsika ny fomba hikarakarana tsara ny endrika ary tsy apetraka fotsiny ny singa iray satria fotsiny, fa manana fanazavana mitombina. Tamin'ny fehezanteny tamin'ny 10 septambra dia nisy baolina miloko izay midika hoe ny lokon'ny iPhone 5C vaovao raha ny baolina hafa kosa dia tsy nanana fari-tany volondavenona sy nofeno fotsy izay midika fa hanana loko vaovao roa ny iPhone 5S: volafotsy sy grafita.
Ny endrik'i Apple dia tsy misy kilema ary ireto misy zavatra sasantsasany azontsika jerena amin'ny fanasana ny 22 Oktobra (izay tsy dia maro loatra):
Ny ampahatelon'ny logo Apple: Eo amin'ny farany ambany dia ahitantsika ny ampahatelon'ny logo Apple miseho amin'ny loko fotsy, toy ny mahazatra. Avy eo ny "sampana" misy amin'ny sary famantarana Big Apple dia miseho mandritra ny fanasana manontolo amin'ny loko maro samihafa.
Loko maro: Araka ny efa nolazaiko dia miseho im-betsaka mandritra ny fanasana ilay "sampana" an'ny logo. Manana saika ny loko chromatic manontolo amin'ny loko fototra avy amin'ny mavo ka hatramin'ny volomparasy amin'ny alàlan'ny gradients eo amin'ny mavo sy volomboasary na manga sy maitso.
Keynote ho an'ny 22 Oktobra: Inona no azontsika jerena?
iPad 5 sy iPad Mini 2: Mazava fa hahita karazana iPad vaovao isika, izay hanjakan'ny hatsarana vaovao sy fanatsarana ny zava-bita anatiny, izay hametraka ireo fitaovana ireo eo an-tampon'ny latabatra.
Smart mandrakotra: Araka ny efa nanamarihako teo aloha, ny Smart Covers dia ho voakasik'ity keynote ity miaraka amin'ny famolavolana endrika be dia be mifandraika amin'ny fanavaozana ny iPad 5 sy iPad Mini 2
OS X Mavericks: Apple dia mety handefa ny OS X Mavericks, ny rafitra fiasa vaovao ho an'ny Mac, na farafaharatsiny hanome daty famoahana ofisialy antsika io.
Macs: Toy ny iPads, ny solosaina Apple dia voakasik'izany ihany koa. Afaka nahita ilay Mac Pro vaovao niasa isika.
Fanazavana fanampiny - Ofisialy: Apple dia manambara ny hetsika iPad amin'ny 22 Oktobra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » Fakafakao ny fanasan'i Apple ho an'ny keynote 22 Oktobra
SevenCenter: Ivotoerana fampandrenesana iOS 7 ao amin'ny iOS 5.xx sy iOS 6.xx (Cydia)
Fetsy iOS 7 efatra mety tsy ho fantatrao